NOOCYO CAARO LEH: HABABKA IYO HABABKA HALGANKA - KU'SAABSAN
Sida loo burburiyo caarada caarada on pear ah
Inta badan, bannaanka u soo baxaan cuduro kala duwan iyo cayayaanka.
Mid ka mid ah waa caarada caarada leh, iyo sida loola macaamilo, waxaan ku sheegi doonaa maqaalkan.
Waa maxay "cadowga"
Cayayaanka ayaa leh cabbir aad u yar - dhererka qof weyn oo qaangaar ah 0.18 mm. Cayayaanka waxay leeyihiin midab cad, taas oo ay la imaanayaan xilliga dayrta waxaa lagu bedelayaa casaan ama midab khafiif ah. Cayayaanka ayaa u dhaqaaqa gacan-qabashada labo lammaane. Waxay ku jirtaa jiilaalka inta u dhaxeysa miisaanka kelyaha. Hal kelyo waxaa jiri kara qiyaastii 1500 cayayaan. Xitaa ka hor inta uusan ubbooyinku bilaabmin inay ubaxdo, dumar kasta waxay dhigtaa 5-6 ukun, iyaga oo ku dhex jira miisaanka.
Ka dib, iyaga ka, soo bixitaanka dirxiga, kaas oo by waqtiga ubbooyinku bilaabaan inay ubaxu, waxay noqon doontaa shakhsiyaad qaangaar ah. Waxay ku qodaan caleemaha aan caleemaha lahayn oo si tartiib tartiib ah ugala qayb galaan muuqaalka gala.
Waa muhiim! Caleemaha dhimanaya ee geedaha qaba waa in la gubaa, maadaama ay ku jiri karto dirxiga cayayaanka.
Caleemaha cudurku ku dhacay, jaale-cawo waxay bilaabmaysaa inay muuqato, ka dibna madow barar yaryar. Mararka qaarkood waxaa jira isku xirnaansho guntan jeex ah, taasoo abuuraysa muuqaalka "tumor".
Waqti ka dib, qalajinta epidermis iyo dillaac of guggas ayaa la arkay. Xaaladdan oo kale, shilinta waxay raadinayaan caleemo cusub oo cusub waxayna u dhaqaaqaan.
Dhibaato ka timi sax
Ka dib markii ay ku degtay xaashida, cayayaanku wuxuu bilaabmaa inuu nuugo casiirka. Caleemaha sida waxaa jira xad gudub ku ah dheelitirka biyaha, hoos u dhaca xaddiga of chlorophyll, joojinta nidaamka photosynthesis. Warshadu waxay noqoneysaa mid daciif ah.
Haddii geedku soo weeraray tiro badan oo cayayaanka, miraha way koraan, laakiin waxay leeyihiin qiyaas yar. Ticks waxay halis u yihiin dhirta xilli kasta oo horumar ah - waxay si xun u saameeyaan geedkii inta uu kobcayo iyo inta lagu jiro abuuritaanka midhaha.
Galley badanaa waxay saameysaa linden, ash buur, buckthorn badda.
Caarada galleyda ee pear-ka ayaa sababi karta waxyeello aad u weyn, markaa waa in si deg deg ah loo xakameeyo tallaabooyinka.
Inta badan dhalmada Gallaydu waxay gacan ka geysataa xulashada gudaha iyo isticmaalka joogtada ah ee walxaha organophosphate ee loogu talagalay geerida cadaawayaashooda. Mararka qaarkood tirooyinka shilinta ayaa kordha sababtoo ah kordhinta bacrimintooda iyada oo saameyneysa kicinta daroogada.
Waxyaabaha halista ah
Haddii beertaada ay soo weerarto cayayaanka khatarka ah, daaweynta waa in la sameeyaa sida ugu dhakhsaha badan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loola dagaallami karo cayayaanka. Tixgeli iyaga si faahfaahsan.
Waa xayawaan lagaga hortago cayayaanka iyadoo la adeegsanayo habkan ugu wax ku ool ah. Thanks to tayada dhul-koraya, tirada caarada caarada iyo dirxigooda ayaa la dhimay.
Ma taqaanaa? Ticks jecel yahay kuleylka. Ma gaari doonaan dusha ilaa inta hawadu kululayso ugu yaraan 10 ° C.
Wuxuu ka hortagaa cayayaanka iyo hirgelinta noocyo kala duwan oo bacarimis ah iyada oo la adeegsanayo Bacriminta macdanta. Waxay u oggolaanayaan in ay kordhiyaan cadaadiska osmotic ee dheecaanka unugta, taas oo adkeyneysa in ay quudiyaan shilinta.
Si loola dagaallamo goobaha, waxaa lagula talinayaa inay fuliyaan tallaabooyinka soo socda:
nadiifi jirridaha iyo lafaha qalafsan ee ka soo jilicsan jiritaanka;
ururiyaan oo ka saaraan haraaga dhirta ee goobta (miro iyo caleemo dhacay);
si joogto ah u fuliyaan taajka manjooyin.
Haddii aysan jirin cawska beertaada, waxay yareeyn doontaa suurtogalnimada xayawaanka saxarada.
In la dagaallamo lafaha ciirta, waxaa caadi ah in la isticmaalo wakiilada gaarka ah - acaricides.
Si loo hirgeliyo daaweynta geedaha, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo diyaar garowga organophosphorus iyo chlorine-containing. Waad ku mahadsan tahay habkan, waxaad ka takhalusi kartaa cayayaanka si dhaqso ah. Waxay saameeyaan habka dheef-shiidka dheef-shiidka oo keena dhimashadiisa. Pear waa in la shaqeeyaa laba jeer toddobaadkii muddo 2 bilood ah.
Waa muhiim! Marka aad iibsato geedo cusub si taxadar leh u baaro caleemaha iyo caleemaha. Geedka cudurka qaba waa xakameeyaha shilinta, iyadoo ay sabab u tahay dhirta kale ee dhirta laga yaabo inay ku xanuunto.
Ilaalinta xakamaynta waxaa lagu samayn karaa cirbad. Sababtoo ah xaqiiqda ah in walaxda si dhakhso ah u gasho dhammaan qaybaha geedka, taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka takhalusto tiro badan oo cayayaanka.
Haddii geedku uu ku dhuftey cayayaan khafiif ah, waa maxay qaabka geedi socodka? Waxaad isticmaali kartaa daroogada sida "Decis", "Inta badan" iyo "Fufanon."
Beerta qaarkeed ma ahan mid degdeg ah si ay u isticmaasho kiimikada si ay u dilaan cayayaanka, maadaama ay si xun u saamayn karaan tayada dalagga. Xaaladdan, doorbididda waxaa la siiyaa alaabta dhirta ku salaysan.
Haddii beertaada ay ku dhacdo cayayaan qolfo leh, waxaad isticmaali kartaa hababka loola tacaalayo daaweynta dadweynaha. Isku buufinta isticmaali faleebo marigolds ah, baradhada, lørkons, chamomile, toonta iyo ash.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay, caarada caarada ayaa laga helay 1989kii oo ay soo saartay aqoonyahano ka soo jeeda Austria, Alfred Nalepa.
Waxaan bixinaa si aan u barano qaar ka mid ah cuntada caadiga ah.
Duuf baradhada. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato 1 kg oo dushooda cusub ah (waxaa lagu beddeli karaa 500 g qalalan), si fiican u jar. Maqaarka la jarjarey ku shub 1 baaldi biyo diirran. Muddo 4 saacadood ah, isku dar ah ayaa la isku shaandheeyay, ka dibna la sifeeyaa, waxaa lagu daraa 1 tbsp. qaaddo saabuun. Isticmaal xalka 24 saacadood gudahood ka dib diyaarinta.
Faleebo marigolds. 100 g oo ubax ah ayaa lagu daraa 1 l oo biyo ah waana la kariyey. Maraq ayaa ku adkeysanaya 5 maalmood kadibna lagu qasi karaa isla cabirka biyaha.
Faleebo løndagel. 1 kg oo caleenta ku shub 3 litir oo biyo ah. Isku dariddu waxay ku adkaysataa 3 maalmood. Kadibna xalku waa la sifeeyaa oo saabuun yar oo saabuun ayaa lagu daraa.
Soo ogow wixii aad samayn lahayd haddii beertaada ay ku dhacdo caarada caarada.
Daawooyinka dadku waxay leeyihiin waxtarkooda wanaagsan waxayna caawiyaan ka takhalusi cayayaanka.
Cayayaanka lo'da ee caleenta waa cayayaan aad u khatar ah oo waxyeelo weyn u geysan kara beeraha iyo geedka. Marka ay heleen cayayaan, waxaa lagama maarmaan ah in isla markiiba la qaado tallaabooyin ka hortagga cayayaanka.